Galena: njirimara, mbido, ojiji na ngwa nke ihe ịnweta a | Network Meteorology
Ihe niile banyere ịnweta galena
Otu n'ime mineral kachasị mara amara n'ụwa maka ịbụ onye nwere ọdịnaya kachasị elu bụ galena. Achọpụtala ya kemgbe ọtụtụ narị afọ dịka ọ dị na steeti a na-enyocha nke ọma ma nwee ike ịchọta ya n'ụdị na-atọ ụtọ ma dị iche iche. Ọ bụ ụdị ịnweta bụ isi nke sitere na mineral ndị ọzọ dị ka cerussite, anglesite na ndu. Emebere mineral ndị ọzọ na galena.
N’isiokwu a anyị ga-egosi gị ụdị njirimara niile, mbido na ojiji nke ịnweta galena.
2 Mmalite nke galena
3 Ojiji na ngwa nke galena
N'ime nhazi nke galena anyị nwere adịghị ọcha dị ka ọla ọcha na bismuth nke nwere ike igbanwe njirimara nke ịnweta niile. Ọ bụrụ na anyị chọta ụdị galena nke nwere nnukwu bismuth nwere ike ịnwe octahedral cleavage. Mgbe anyị chọtara ọlaọcha, anyị nwekwara ike ime ka ọ gosi ọtụtụ iberibe iberibe iberibe.
O so na ndi otu sulfides na o nwere oke nkasi obi na oke Mosh. Banyere agba ya, ọ nwere nnọọ àgwà ndị mara mma nke na-eme ka ọ maa mma n’anya mmadụ. O nwere ndo di iche iche n’acha ocha, acha anụnụ anụnụ n’enwu anwu. Site n'inwe usoro ndị agba a njirimara ya bụ ngwa ngwa. Maka ndị na - enwetaghị ahụmịhe nke mineral, ọ ga - abụ ihe dịkarịsịrị mgbagwoju anya, mineral ọzọ dịka ngwakọta. Blende bụ mineral dị na Iron ma nwee kristal mechie. Isi ihe dị iche na galena bụ na ọ na-agba ọchịchịrị, ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ oji. Njupụta ahụ dịkwa ala ma ọ siri ike karị.
E nwere oligistia ndị ọzọ nwekwara ike ịdị ka galena mana ha nwere agba ọbara ọbara na-acha ọbara ọbara ma ọ bụghị cubic. Galley nwere ọdịdị iko nke na-eme ka ọ dị ka ma ọ bụ n'ozuzu cubic. Anyị nwekwara ike ịchọta ya ka ọ na-etolite polyhedron nwere akụkụ 8 na ọbụlagodi na ibe anyị. Ọ bụrụ na ịfụ ụdị mgbanwe ọ bụla na ụfọdụ ogige sulfate na-agbakwunye, anyị nwere ike ịhụ na a gbanwere ịnweta a ka ọ bụrụ ihe anyị maara dịka anglesite ma ọ bụrụ na anyị etinye carbonates ọ na-aghọ cerussite.
Ọ nwere exfoliation na-ewere n'ime akaụntụ na ya elu bụ ewepụghị na nkewa dị ka mfe ọkọ. Nke a dabere na ngụkọta ihu nke ọnụ ahụ nwere. Galena nwere ike ime n'ụdị granular, leaky, na exfoliating. Usoro ọgwụ ya bụ PbS.
Mmalite nke galena
Okwu a bu galena ka esi n’okwu a bu “galene” nke putara onye ndu. Ejiri okwu a na-ezo aka na oke ndu anyị nwere ike ịchọta na mineral. Nnyocha ndị ọzọ na-egosi na ndị Ijipt jikwa galena mee ihe ịchọ mma. Ejiri ya na anya iji nyere aka chebe ha pụọ ​​na anwụ na anwụ. Ejikwa ya tinye ya n’ahụ iji chụpụ ụmụ ahụhụ.
Mmalite nke nrigbu nke galena dị ka akụ malitere na Cartagena ọtụtụ narị afọ gara aga. A malitere imebi mines galena, n'ime afọ ole na ole, ọ ghọọla ihe egwu nke mechara nweta iji mineral a n'ọtụtụ ebe.
Anyị nwere ike ịhụ nkwụnye ego galena na, dị ka nyocha ala, na-ejikọtakarị ya na okwute nwere ntakịrị ọchịchị acid ma ọ bụ nkume granite na pegmatitic. A pụkwara ịchọta ha n'akụkụ ụlọ ọrụ ndị na-egwupụta nkume carbonate. A na-ahụ ego ndị a dị na galena n'ọtụtụ ebe gburugburu ụwa ma na-akwụ ụgwọ pụrụ iche maka mmịpụta nke ịnweta. Ebe ụfọdụ dị n’ụwa a ebe amịpụtara galena bụ: Australia, Peru, Ireland, Czechoslovakia, England na United States.
Na Spain, anyị na-achọta ego galena na Carolina na Linares. Ha bụ nkwụnye ego ebe a na-enweta oke nke Galena. Na Iberia Peninsula anyị nwekwara ike ịchọta galena na Ciudad Real, Murcia na Lérida.
Ojiji na ngwa nke galena
Ugbu a, anyị ga-amata ihe kpatara mkpa nke mmịpụta nke ịnweta. Ndị Ijipt jiri ya mee ihe eji achọ mma n’oge ochie, dịka anyị kwuburu na mbụ. N'iji nke oge a, enwere ike ịhụ na ejiri kristal ịnweta galena buru ụzọ kpokọta redio. Nke a bụ ebe ọ bụ na ha rụrụ ọrụ dị ka ihe ndozi maka akara ndị antenna jidere. Emechaa diode mgbazigharị mgbazi mmezi.
N'ime galenas ndị amịpụtara na Spain bụ ụdị egwu A na-amịpụta ndu a na-eji eme tubes, mpempe akwụkwọ na pellets eji eme ihe mkpuchi ahụ na ihe ndị ọzọ na-eme ka redio.
Ọ bụrụ na anyị elekwasị anya na ụgbọ elu ime mmụọ, maka ọtụtụ ndị galena na-eweta nkwekọ na nguzozi na ndụ anyị. O nwere ike inye aka ma nwee ike ime ka ndị mmadụ lekwasị anya n'eziokwu na ebumnuche. A na-ekwu na ọ na-enyere gị aka imeghe uche ma gbasaa echiche ka ị na-ejikwa ihe mgbaru ọsọ ịchọrọ ịchụso. Ka anyị ghara ichefu na itinye uche n’ihe ịchọrọ ị nweta ruo ogologo oge siri ike karịa ka ọ na-ada. N'ihi ya, Ọtụtụ mmadụ na-echigharịkwuru olu olu galena ma ọ bụ ọla aka dị ka amulet.
A na-ekwukwa na ọ bụrụ na onye ahụ yie galena ahụ ma na-enwekarị àgwà na-adịghị mma, omume ndị a ga-anọgide na ndabere, na-enye onye ahụ ohere inwe mgbanwe nke ka mma ma mepụta omume na-arụpụta nke na-enyere ha aka inwe ọganihu.
Otu ihe dị egwu bụ na enwere ndị na-ebu ihe atụ nke ịnweta a n'ime akpa uwe ogologo ọkpa ha ma ọ bụ uwe elu dịka ọ ga-abụ amulet. A na-etinyekarị ya n'ime ụlọ na ebe ọrụ iji na-eburu n'uche ebumnuche anyị chọrọ iji mezuo.
Dịka ị pụrụ ịhụ, galena bụ nnukwu ịnweta nke a maara nke ọma n'akụkụ ụwa niile yana ọtụtụ ojiji bara uru. Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere galena.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Geology » Ihe niile banyere ịnweta galena
Ihe niile ịchọrọ ịma gbasara limonite
Gịnị bụ akwụ